Cimilada qaaradda | Saadaasha Shabakadda
Xakamaynta Arleb del Duero Park (Salamanca)
El Cimilada Qaaradaha waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan. Sababta Asal ahaan, maxaa yeelay afarta xilli waxay si aad ah uga duwan yihiin midba midka kale: guga dhirta waxaa ka buuxsama ubaxyo, xagaaga waa kuleyl, xilliga dayrta caleemaha geedaha ayaa midabbadalaada, jiilaalka dhulkuna wuxuu ku fadhiyaa baraf.
Ma jiraan dhir iyo xayawaano badan oo kala duwan sida cimilada kulaylaha, laakiin roobabka badan awgood, kaymaha iyo muuqaalka dhulku waa meelaha layaabka leh, oo nolosha layaab leh.
1 Halkee ayay ka muuqataa sidee se lagu gartaa?
2.1 Cimilada badda Qaaradda Yurub
2.2 Cimilada qaaradaha Manchurian
2.3 Cimilo qabow oo qaaradeed
2.4 Cimilo qaaradeed oo qalalan
Halkee ayay ka muuqataa sidee se lagu gartaa?
Cimilo-dhaqaaleedka Zaragoza (Isbaanish). Gobolkan cimilada waa qaaradda-dhexe ee Qaaradda, oo leh kuleylo aad u kulul oo qalalan iyo qabow iyo qoyaan qabow.
Cimilada noocan ahi waa maxay degan aagga ugu ballaaran ee Waqooyiga Hemisphere, oo ka muuqda bartamaha iyo bariga Yurub, bartamaha Aasiya, gudaha Shiinaha, Iiraan, gudaha USA, Kanada. Koofurta Hemisphere waxaa sidoo kale jira, sida meelaha qaar ee waqooyiga qaaradda Afrika iyo meelaha gudaha ee Argentina.
Meelaha ay ku taal cimilada qaaradda waxaa lagu gartaa inay ku yaalliin latitude dhexda iyo helitaanka caqabado buuro leh oo ka hortaga saameynta badda ama dabeylaha qabow ee ka yimaadda ulaha kaas oo keeni kara heer kulka daran.
Xilliyadaha, si aad ah ayaa loo kala soocay, sidaan hore u sheegnay. Laakiin aan eegno si faahfaahsan.
Xilliyada cimilada guud ee qaaradda (xogta guud)
Primavera: heerkulku wuxuu u dhexeeyaa 5 ilaa 15ºC. Dhaxan dambe ayaa dhici kara, laakiin meerkuri ku jira heerkulbeegga ayaa bilaabmaya inuu kaco. Dhinaca kale, roobka xilligan ka da’a ayaa inta badan ka yar sannadka intiisa kale; iyadoo ay sidaas tahay, waxay dhici karaan ugu yaraan 40mm / bishii.
Summer: heerkulku wuxuu u dhexeeyaa 15 ilaa 30 ama 32ºC ugu badnaan. Roobabku si farxad leh ayey u da'aan inta lagu jiro xilliga oo dhan, iyadoo lagu qiimeeyo 50-100mm / bishii.
Dhicitaan: meerkuriga ku jira heerkulbeeggu wuxuu bilaabmaa inuu dhaco, in kabadan ama kayar ugu badnaan 20ºC iyo uguyaraan 10ºC, daruurtuna waxay bilaabaan inay noqdaan jilayaasha xilliga, taas oo ah tii labaad ee sanadka. Waxay udhaxeeyaan inta udhaxeysa 70 iyo 90mm / bishii. Dhamaadka dhammaadka Sebtember, dhaxankii ugu horreeyay ayaa dhaca.
Jiilaal: saddexdaas bilood, dhaxan iyo baraf baraf ah ayaa is raaca. Heerkulku waa 10ºC ugu badnaan iyo illaa -10ºC ama ka badan.
Waxaan aragnay heerkulka iyo roobka ka dhici kara cimilada qaaradda, laakiin si aan wax badan u ogaano, maxaa ka fiican in la ogaado noocyada kala duwan ee jira, maaddaama ay kuxirantahay goobta juquraafi ahaan, waxaa jiri kara kala duwanaansho. Sidaa darteed, noocyo badan oo cimilada qaaradda ah ayaa la yaqaan, oo ay ka mid yihiin:
Cimilada badda Qaaradda Yurub
Waa midda ka dhacda gudaha Jasiiradda Iberian Peninsula, waqooyiga Talyaaniga, gudaha Griiga, Saxaraha Atlas, iyo kuwo kale. Waxaa lagu gartaa yeelasho kuleyl aad u kulul oo aan aad u di’in xagaaga, iyo jiilaal qabow oo qabaw leh.
Cimilada qaaradaha Manchurian
Cimilada noocan ahi waa tan ka dhacda Woqooyiga Kuuriya, woqooyiga Shiinaha, iyo magaalooyinka Ruushka qaarkood, sida Khabarovsk. Waxay leedahay a celcelis ahaan heerkulka sanadlaha ah ee ka sarreeya 0ºC laakiin ka hooseeya 10ºC. Roob-sannadeedka ayaa ka badan ama ka yar 500mm.
Cimilo qabow oo qaaradeed
Waxay ku dhacdaa inta badan bariga iyo bartamaha Yurub iyo koonfur-bari Kanada. Waxay la mid tahay tii hore, laakiin xoogaa qaboojiye ah oo qalalan.
Cimilo qaaradeed oo qalalan
Cimilada noocan ah waxaa laga helaa Bartamaha Aasiya, Mongolia, iyo kuwo kale. Waa kuleyl aad u daran xilliga kuleylaha, waana qabow xilliga qaboobaha, isagoo awood u leh inuu soo saaro dhaxan xoogaa ah.
Cimilada noocan ah waa meesha aan ka arki karno kaymo xaalufin ah. Geedaha sida khariidadaha ama geedaha, geedaha waaweyn ee ugu badan (geedaha, firska, larches, beroosh), waxay ku nool yihiin dhulka dhexe ee meeraha. Noloshu uma sahlana iyaga: haddii roobabku tiro badan yihiin oo heer kulku aanu badnayn, waxay koraan inta ay kari karaan; Dhinaca kale, marka qabowgu yimaado, waa inay keydiyaan tamar si ay ugu noolaadaan xilliga qaboobaha, joojinta quudinta caleemohooda marka laga hadlayo geedaha caleemaha, iyo joojinta koritaankooda. Heerkulku wax badan ayuu ku kala duwan yahay xilli ilaa xilli, laakiin mahadnaqa isbeddelka ay sameeyeen, waxay ku guuleysteen inay gaaraan maalmahayaga.
Xayawaanku sidoo kale ma sahlana, gaar ahaan xilliga qaboobaha. Xaqiiqdii, waxaa jira shimbiro fara badan oo u hayaama latitude diiran, sidaas awgeedna uga fogaanaya qabowga iyo dhaxanta. Kuwa sii jooga, sida orso oo bunni ah, waxay galaan godad si ay u jiifsadaan. Xayawaannada kale, sida yeyda, dawacooyinka, weasels, deerada ama deerada, waxay raadiyaan meel u adeegi doonta sidii looga ilaalin lahaa heerkulka hooseeya.
Cunnadu aad ayey u yar tahay xilliga jiilaalka, maxaa yeelay xoolo yar ayaa ku dhiiran kara inay baxaan, inta badanna midhaha geedaha waa la soo ururiyay. Nasiib wanaagse, tani weligeed ma waarto, iyo guga kaynta ayaa soo noolaata mar labaad.
Ma ogeyd sifooyinka cimilada qaaradda?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Cimilada » Cimilada Qaaradaha
La Niña waxay imaan kartaa deyrta waxayna sababi kartaa qalalaase cimilo